2 Ndị Eze 11 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Eze nke Abụọ 11:1-21
Atalaya weghaara ọchịchị (1-3)
E chiri Jehoash eze na nzuzo (4-12)
E gburu Atalaya (13-16)
Jehoyada mere ka ihe ka mma (17-21)
11 Mgbe Atalaya+ nne Ehazaya hụrụ na nwa ya nwoke anwụọla,+ ọ gara ka o gbuo ụmụ eze niile.+ 2 Ma, Jehoshiba* nwa Eze Jehoram, nwanne Ehazaya, zooro ezoro si ebe ụmụ eze ndị nwoke a chọrọ igbu nọ kupụ Jehoash+ nwa Ehazaya. O kunyere ya nwaanyị na-enye ya ara ma kpọba ha abụọ n’ọnụ ụlọ dị n’ime ime. Ha zoro ya ka Atalaya ghara ịhụ ya, nke mere na e gbughị ya. 3 E zoro ya n’ụlọ Jehova ruo afọ isii mgbe Atalaya nọ na-achị ndị obodo ahụ. 4 N’afọ nke asaa, Jehoyada ziri ozi, a kpọtara ya ndị isi otu narị otu narị ndị na-ahụ maka ndị nche Keria na ndị isi ndị na-eche obí eze nche,*+ ya agwa ha ka ha bịa n’ụlọ Jehova. Mgbe ha bịara n’ụlọ Jehova, ya na ha gbara ndụ, ya agwakwa ha ka ha ṅụọrọ ya iyi, ha aṅụọrọ ya iyi, ya egosizie ha nwa eze.+ 5 Ọ gwakwara ha, sị: “Ihe a ka unu ga-eme: Unu ga-eke onwe unu ụzọ atọ. Otu ụzọ ga-abịa ọrụ n’Ụbọchị Izu Ike. Ha ga-eche ụlọ*+ eze nche nke ọma. 6 Otu ụzọ ọzọ ga-anọ n’Ọnụ Ụzọ Ámá Ntọala, otu ụzọ ọzọ anọrọ n’ọnụ ụzọ ámá dị n’azụ ndị na-eche obí eze nche. Keenụ ndị ga-eche ụlọ ahụ nche otú ọ ga-abụ, otu ndị chechaa, ndị ọzọ echee. 7 Ka ìgwè abụọ n’ime unu, ndị na-agaghị anọ ọrụ n’Ụbọchị Izu Ike, nọrọkwa na-eche ụlọ Jehova nche nke ọma iji chebe eze. 8 Unu ga-agba eze gburugburu, onye nke ọ bụla n’ime unu ga-ejikwa ngwá agha ya n’aka. Gbuonụ onye ọ bụla batara ebe unu nọ. Sorokwanụ eze ebe ọ bụla ọ na-aga.”* 9 Ndị isi ìgwè otu narị otu narị+ ahụ mere nnọọ ihe Jehoyada onye nchụàjà gwara ha. Onyeisi nke ọ bụla kpọọrọ ndị nọ n’ìgwè ya, ma ndị nke nọ ọrụ n’Ụbọchị Izu Ike ahụ ma ndị nke na-anọghị ọrụ. Ha bịakwutere Jehoyada onye nchụàjà.+ 10 Jehoyada nyekwara ndị isi ìgwè otu narị otu narị ahụ ube na ọta Eze Devid, ndị dị n’ụlọ Jehova. 11 Ndị na-eche obí eze nche+ gara nọrọ ebe ha na-anọ, malite n’ebe aka nri ụlọ ahụ ruo n’ebe aka ekpe ya. Ha nọkwa ebe ịchụàjà+ na ụlọ nsọ ahụ nso, gbaa eze gburugburu, onye nke ọ bụla n’ime ha jikwa ngwá agha ya n’aka. 12 Jehoyada kpọpụtakwara nwa eze,+ kpuwe ya okpueze, dokwasị Ihe Àmà*+ n’isi ya, chie ya eze ma tee ya mmanụ. Ha malitekwara ịkụ aka, na-asị: “Eze, ị ga-adị ogologo ndụ!”+ 13 Mgbe Atalaya nụrụ mkpọtụ ndị na-agba ọsọ, ọ bịakwutere ha ozugbo n’ụlọ Jehova.+ 14 Ọ hụkwara ka eze guzo n’akụkụ otu ogidi otú ha si eme+ ma e chiwe mmadụ eze. Ndị isi na ndị na-afụ opi+ nọkwa n’akụkụ eze. Ndị obodo ahụ niile nọkwa na-aṅụrị ọṅụ ma na-afụ opi. Ihe a mere ka Atalaya dọwaa uwe ya, tie mkpu, sị: “Ha agbaala m mgba okpuru! Ha agbaala m mgba okpuru!” 15 Ma Jehoyada onye nchụàjà gwara ndị isi ìgwè otu narị otu narị+ ahụ, ya bụ, ndị isi ndị agha, sị: “Kpọpụnụ ya ebe a unu nọ. Ọ bụrụkwa na onye ọ bụla esoro ya, jirinụ mma agha gbuo onye ahụ.” Jehoyada onye nchụàjà kwukwara, sị: “Unu egbula ya n’ụlọ Jehova.” 16 Ndị agha ahụ wee kpụrụ ya. Mgbe ha kpụ ya rute ebe ịnyịnya si abanye n’ụlọ* eze,+ ha gburu ya. 17 Jehoyada mekwara ka Jehova na eze na mmadụ niile+ gbaa ndụ na ha agaghị akwụsị ịbụ ndị Jehova. O mekwara ka eze na mmadụ niile+ gbaa ndụ. 18 Mgbe e mechara, ndị obodo ahụ niile gara n’ụlọ Bel, kwatuo ebe dị iche iche a na-achụrụ ya àjà,+ kụriekwa arụsị ndị dị ebe ahụ.+ Ha gbukwara Matan bụ́ onye nchụàjà Bel+ n’ihu ebe ịchụàjà ndị ahụ. Jehoyada onye nchụàjà họpụtakwara ndị ga na-elekọta ụlọ Jehova.+ 19 Ọ kpọkwaara ndị isi ìgwè otu narị otu narị+ ndị agha, ndị nche Keria, ndị na-eche obí eze nche,+ na ndị obodo ahụ niile, ka ha si n’ụlọ Jehova dulaa eze n’ụlọ* ya. Ha sikwa ụzọ e si aga n’ọnụ ụzọ ámá ndị na-eche obí eze nche dulaa ya n’ụlọ eze. Ọ gakwara nọrọ n’oche ndị eze na-anọ.+ 20 Ndị obodo ahụ niile nọkwa na-aṅụrị ọṅụ. Obodo ahụ dakwara jii n’ihi na ha ejirila mma agha gbuo Atalaya n’ụlọ eze. 21 Jehoash+ dị afọ asaa mgbe ọ malitere ịchị.+
^ Jehoshiba bụ nwaanyị.
^ Na Hibru, “ndị ọgba ọsọ.”
^ Na Hibru, “mgbe ọ na-apụ apụ na mgbe ọ na-abata abata.”
^ O nwere ike ịbụ akwụkwọ mpịakọta e dere Iwu Chineke.
2 Ndị Eze 11